Fanambarana feno fahendrena avy amin’i Mgr Odon Marie RAZANAKOLONA | GAZETY_ADALADALA
Fanambarana feno fahendrena avy amin’i Mgr Odon Marie RAZANAKOLONA
Posted on 25/02/2009 by gazetyavylavitra
…Ry Malagasy mpiray tanindrazana, ho amintsika hatrany anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina.
Ry havana, manoloana ny zava-misy hatrehin’ny firenentsika izao dia tiako ny manao izao fanambarana izao:
Voalohany, isaorako ireo nametra-pitokisana sy fanantenana tamin’ny FFKM ka nangataka taminy mba hanao fanelanelanana eo amin’Atoa Marc Ravalomanana sy Atoa Andry Rajoelina mikasika izao savorovoro eto amin’ny firenena izao. Rehefa nifampidinika tamin’ny roa tonta dia nametraka tamin’ny FFKM ny solontenan’ny sekretera jeneralin’ny Firenena Mikambana mba handraisan’ny FFKM ny fanelanelanana.
Niezaka araka izay fahaizana sy traikefa ananany anefa ny ao amin’ny FFKM mba hampahomby ny fifanatonana hahitàna vahaolana. Misy fetrany anefa ny asa sy ny fahefan’ny mpanelanelana satria tsy mipetraka ho mpitsara izy. Mikatso anefa, ary tsy nahomby ny fiaraha-midinika nampifanatrehana ny roa tonta na dia mbola mitohy aza amin’izao fotoana izao.
Tsorinay etoana fa nanao ny herinay rehetra izahay, mba hitadiavam-bahaolana hamahana ny krizy ka samy natonina manokana izy mirahalahy mianaka mba handresena lahatra azy hifampidinika an-databatra boribory.
In-telo nihaona ny roa tonta, nefa tsorina fa tsy lasa lavitra ny dinika. Taorian’ireo ezaka rehetra voatanisa ireo dia tsapa fa tsy ho tafavoaka ny zavatra, ary mety misy fiheverana anay ao amin’ny FFKM, ary indrindra ny tenako, ho mitanila sy miray tsikombakomba tamin’ny zava-nitranga sy mbola ho avy aoriana.
Koa rehefa nandinika lalina aho dia nihaona tamin’ireo mpiara-miasa amiko, dia tapa-kevitra fa tsy handray anjara intsony amin’ny asa fanelanelanana nankinina tamin’ny FFKM. Ary iriko, ary apetrako eo am-pelatanan’ny Firenena Mikambana mba hikarohana fomba hafa mifanentana amin’ny fahasarotan’ny toe-draharaha. Dia miangavy ny Firenena Mikambana mba hitady vahaolana, ary hitady olona na ankolafin’olona hanatanteraka sy hanohy ny asa izay efa natomboky ny FFKM.
Mba miangavy ny mpitandro filaminana aho mba hiandraikitra ny filaminam-bahoaka sy hiaro azy sy ny fananany araka ny sata izay ijoroan’izy ireo.
Farany, dia manentana antsika rehetra tsy ankanavaka aho mba hitodika amin’Andriamanitra, mba hiombom-bavaka ho an’ny fandriampahalemana eto amin’ny firenentsika.
Natao teto Antananarivo, anio 25 febroary 2009
Mrg Odon Razanakolona, Arsevekan’Antananarivo.
Nanao ity fanambarana ity ny Mgr Odon Razanakolona, rehefa tsara petrapetrak’ingahy Ravalomanana isan’andro vaky izao. Feno fangalampiery mantsy ny dinika ary toa zavatra tsy dia manan-danja loatra eo imason’ny mpitondra. Androany fotsiny ohatra dia nilaozan’ingahy Ravalomanana nandeha tany Toamasina niresadresaka tamin’ny mpitandro filaminana sy ny tompomenakely tany an-toerana, ary dia nolazain’ny Radio Mada avy eo (nony nifarana ny diany tany an-toerana) fa hoe handeha hamonjy ny fihaonan’ny roa tonta ny filoha. Tsy izay anefa no nitranga fa lasa nivantana tany Mahajanga ingahy Ravalomanana ary any no hatory anio alina. Koa satria tsy niomana tamin’izany ny tany Mahajanga ka dia nikorapaka. Nirimorimo ny fiara Mercedes mba handeha haka azy tany Amborovy. Niala fiara 205 nifanena tamin’ny teny an-dalana; ka nanao ambony ambany. Naratra mafy ny mpamily, ary dia voatery nitady fiara hafa haingana hitsenana an-dramose.
Telo andro izay no lasa, ary teo amin’ny ora iray sy sasany, na roa raha be indrindra rehefa tena atambatra no nihaonan’ny roa tonta tan-databatra boribory. Androany dia niandry vasoka teny amin’ny Hotely Le Hintsy Ambohimanambola ry Andry Rajoelina sy ireo solontena.
Nampiantso mpanao gazety koai AndryRajoelina izao hariva izao ary nilaza fa tsy hanohy intsony ny fifampidinihana. Raha niezaka nanontany azy momba izay ho tohin’ny eny ankianja ny mpanao gazety, dia mbola hisy fandaminana ny amin’zany hoy izy, ary tsy misy aloha ny famaliana fanontaniana, raha ny amin’ity anio hariva ity.
Iza marina no mitady izay handaminana ity raharaha ity e? Ary iza no tsy vonona? Anjaran’ny tsirairay no mamakafaka.
Tsy hitako maso koa ity fa resaka henoko androany: efa feno miaramila telo camions, hono, izao ao anatin’ny faritra tokony hanorenana ilay trano vaovao tokony ho solon’nyHotel de Ville may eo amin’ny kianjan’ny 13 mai. Haninona?
Hanao sit-in eny Soanierana koa ny mpiasan’ny JIRAMA rahampitso ho fanoheran’izy ireo izay lazainy fa tsy rariny atao amin’ny mpiasa (fanimbazimbana ny soatoavina maha-fianakaviana ny fianakaviana ao amin’ny Malagasy, ohatra)
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: 13 mai, Andry RAJOELINA, démocratie, demokrasia, FFKM, Marc Ravalomanana, mouvement populaire, Odon Razanakolona, riots |
« Anao ny fitenenana(*) Niverina i Mgr Odon Razanakolona, gidraka any Fianarantsoa, Feno rasil Andoharanofotsy »
simp, on 26/02/2009 at 12:53 said:
« Iza marina no mitady izay handaminana ity raharaha ity e? Ary iza no tsy vonona? »
valiny: samy tsisy mitady handamina, samy tsisy vonona!
* ra8: jiolamboto, miezaka ny maka avantazy @ izay occasion rehetra mitranga
nanao expres tsy tonga @ fotoana nifanomezana… tsy te hitady ny marimaritra iraisana ary tsy vonona ny handamina… mieritreritra fa manana ny legalite ary manana avantazy be…
* tgv: manao sain-jaza, satria ve tsy tonga in-1 izy dia tonga dia hoe aleo ajanona… milaza izany fa izy koa tsy dia marisika loatra @ ilay marimaritra iraisana… tsy vonona ny handamina, ary mieritreritra fa manana ny rariny ary tsisy kianina ny tolona sy fomba itondrany azy…
* mgr Odon Razanakolona: tsy ampy finoana…
Eritrereto hoe i Moizy/Mosesy izany vao nisy olana iray dia tonga dia niteny t@ A/tra hoe aleo hilamina ry A/tra fa tsy vitako ity a looooooooolll
mais bon, fiainana doly izany ee. Tsy maintsy miravona ihany io d’une maniere ou d’une autre… de tte facon efa simba indray ny ekonomia ka tsy maintsy mila fanarenana bedabe indray… aleo hanao aloha izay te hanao… refa avy eo ve tsy ho hita eo ihany izay azo atao 🙂
misaotra mitantara eee.
manomboka mitady hitongilana kely ny fitantaran’la azy… enfin, tsy haiko izay tena mitranga marina tany aloha fa ilay angle no tiako tenenina…
ikalamako, on 26/02/2009 at 4:06 said:
dia ahoana indray izao ny pronostika aloha ra-simp ? ataovy milay be lesy fa efa te hihomehy indray izahay atsy amin’ny blaogy a !
Vice pdt FJKM Marc R., on 05/03/2009 at 7:40 said:
Hovana atsy ho atsy ny didy folo ao amin’ny Baiboly FJKM, efa eo ampamoriana ny Députe zahay zao ka hovana toy izao:
« Aza mamono olona afatsy amin’ny zones rouges sy ny fanomanana ny sommet africain »